किन गरियो रोमियो एण्ड मुनाको स्याण्डविच बोलको गीत ब्याण्ड ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
किन गरियो रोमियो एण्ड मुनाको स्याण्डविच बोलको गीत ब्याण्ड ?
फिल्मी फण्डा । विनय श्रेष्ठ र सृष्टि श्रेष्ठ मुख्य भूमिकामा रही यही फागुन ११ गतेबाट नेपालभरी प्रर्दशनमा आउने चलचित्र रोमियो एण्ड मुनाको स्याण्डविच बोलको गीत ब्याण्ड भएको छ । प्रेसमिटमा नै दिउँसै दुई नेपाली केटीलाई फिल्मका निर्माण टिम र नायक विनय श्रेष्ठले नंग्याईएको थियो ।
युट्युवमा सिमित उमेर समुहलाई मात्र हेर्न मिल्ने गराइएको गीतको भिडियोलाई टेलिभिजन च्यानलहरुले प्रशारण गर्न अस्विकार गरिरहेका छन् । पिएनजि पिक्चर्स र भि मोशन पिक्चर्सले निर्माण गरेको फिल्म रोमियो एण्ड मुनाको यो किसीमको पब्लिसिटीले फिल्मलाई पक्कै नराम्रो असर पुगेको छ ।
तर निर्देशक नरेश कुमार केसी भन्छन् – ” रोमियाको क्यारेक्टर अनुसारकै उक्त गीतको भिडियो बनाइएको हो । गाउँकी मुना र शहरको रोमियो बिचको कथा हो । त्यसैले दुवैको पृष्ठभूमि भिन्न छ । जुन गीतमा पनि भिन्नता देखिन्छ । ”
केही मेकरहरुले फिल्मलाई आधुनिक शैलीतिर लैजान खोजिएता पनि नेपाली दर्शकको लागि फिल्म निर्माण गरेपछि नेपाली समाज र नेपाली दर्शकको मनोभावलाई बुझ्न नसक्नु यसको कारक हो भन्दा फरक नपर्ला । फिल्म रोमियो एण्ड मुनालाई नरेश कुमार केसीले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा विनयको अलवा श्रृष्टि श्रेष्ठ, प्रज्वल सुजल गिरी लगायतको पनि मूख्य भुमिका रहेको छ ।